Sales Manager Archives - Glory Assumption Space
Sales Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) + Allowance: Meal & Transportation & Phone / ရန်ကင်းမြို့နယ် ။
1.	Sales Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) + Allowance: Meal & Transportation & Phone / ရန်ကင်းမြို့နယ် ။ Job Description: •	Resolve customer complaints regarding sales and service •	Build and maintaining Distribution System/ client relations •	Managing organizational sales by developingabusiness plan that covers sales, revenue and expense controls. •	Meeting planned sales goals. •	Assist sales representatives and team to meet and exceed goals •	Proactively pursue new business and sales opportunities •	Beabrand ambassador and reflect company values at all times •	Develop plans to acquire new customers or clients through direct sales techniques, cold calling, and business-to-business marketing visits •	Follow and make sure that Company’s policies and regulations must implement into Sales department •	ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ Job Specification: •	Any graduate and age under 35 •	Must have driving license •	Must have minimum3years in related field (Selling Water Heater/RO/Blender/Iron/Cooker Hood/Stainless Steel Sink etc……) •	English4Skills (communication level) •	Strong command of Microsoft Office •	Strong problem solving skill and must have good attitude. •	Working Day: Monday to Saturday •	Off Day: Sunday and Public holiday •	Commission: Have (Depend on selling) •	Salary can be negotiate depend on your strong experience. GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်)
၁ ) Sales Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်)/လှိုင်မြို့နယ်။ Job Requirements • University Graduate/Mechanical or structural Engineering degree preferable • Minimum2~3 years of trading and good knowledge of physical market and flows in industries. • Experience in sales and good technical understanding • Having background working experience in Korean/ Japanese trading company preferred. • Business English spoken & written, ability to work under pressure • Strong commercial acumen with flexible mindset, enterprising, enthusiastic and willing to learn. • Required skills: Computer literate, Microsoft office: MS Excel/ word/ power point etc. Job Description • Responsible for developing new buyers • Handling customer enquirers inatimely manner through commercial approach • Visiting customers, getting involve in an early stage of new inquiry/ project • Liaising with management team regarding price quotation and offer, delivery schedule etc. • Strengthen customer relationship and developing new potential business • Market Analysis: monitor competitor and follow market evolution, determine niche marketing opportunities. • Provide accurate and informative market reports • Perform weekly activity report, weekly & monthly market update report • Able to work independent manner and proactively visit customer around Yangon or outside Yangon. • လှိုင်မြို့နယ် ရှိ Trade & Business Development Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ် ရှိ Trade & Business Development Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 ,09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) + Allowance: Meal & Transportation & Phone
1. Sales Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) + Allowance: Meal & Transportation & Phone / ရန်ကင်းမြို့နယ် ။ Job Description: • Resolve customer complaints regarding sales and service • Build and maintaining Distribution System/ client relations • Managing organizational sales by developingabusiness plan that covers sales, revenue and expense controls. • Meeting planned sales goals. • Assist sales representatives and team to meet and exceed goals • Proactively pursue new business and sales opportunities • Beabrand ambassador and reflect company values at all times • Develop plans to acquire new customers or clients through direct sales techniques, cold calling, and business-to-business marketing visits • Follow and make sure that Company’s policies and regulations must implement into Sales department • ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ Job Specification: • Any graduate and age under 35 • Must have driving license • Must have minimum3years in related field (Selling Water Heater/RO/Blender/Iron/Cooker Hood/Stainless Steel Sink etc……) • English4Skills (communication level) • Strong command of Microsoft Office • Strong problem solving skill and must have good attitude. • Working Day: Monday to Saturday • Off Day: Sunday and Public holiday • Commission: Have (Depend on selling) • Salary can be negotiate depend on your strong experience. GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
Sales Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / လှိုင်မြို့နယ်။ Job Requirements • University Graduate/Mechanical or structural Engineering degree preferable • Minimum2~3 years of trading and good knowledge of physical market and flows in industries. • Experience in sales and good technical understanding • Having background working experience in Korean/ Japanese trading company or MNC is preferred. • Business English spoken & written, ability to work under pressure • Strong commercial acumen with flexible mindset, enterprising, enthusiastic and willing to learn. • Required skills: Computer literate, Microsoft office: MS Excel/ word/ power point etc. Job Description • Responsible for developing new buyers • Handling customer enquirers inatimely manner through commercial approach • Visiting customers, getting involve in an early stage of new inquiry/ project • Liaising with management team regarding price quotation and offer, delivery schedule etc. • Strengthen customer relationship and developing new potential business • Market Analysis: monitor competitor and follow market evolution, determine niche marketing opportunities. • Provide accurate and informative market reports • Perform weekly activity report, weekly & monthly market update report • Able to work independent manner and proactively visit customer around Yangon or outside Yangon. • လှိုင်မြို့နယ် ရှိ Trade & Business Development Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောာင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ် ရှိ Trade & Business Development Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 ,09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Manager ( FMCG ) – Female - (5) Posts /လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales Manager ( FMCG ) – Female - (5) Posts /လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်/သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ Requirements • Degree in Business, Marketing or related discipline • Past experience of FMCG distribution min of6years. • Need to spend quality/regular time in the market to drive and guide the team to achieve the targets • Minimum of9years' experience in Sales & Channel Management • Excellent understanding of supermarkets, modern/traditional trade, wholesale • Sharp analytical mind, effective interpersonal and project management skills • Effective people management skill is essential Job Responsibilities • Managing distribution and retail • Development of retail/wholesale channel and its growth in terms of depth and width • Achieving sales and revenue targets month-wise • Responsible for Channel Management, which includes the management of existing/new accounts • Forecasting the sales numbers and indenting the stocks • Initiate and implement Sales & Marketing programs, and develop the sales team to achieve sales targets and increase market share • Establish good working relationships with cross-functional teams to ensure successful implementation of sales programs GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော Chemical Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါ ရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါ ရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Manager – Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
၁) Sales Manager – Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) /မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။ • English (4) Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Sales & Marketing Management Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ( ၃၅ ) မှ ( ၄၅ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • Manager ရာထူးဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ Key responsibilities • Making Strategic Sales Plan and implement the Sales Process upon business plan. • Develop the Action Plan in collaboration with superiors to implement the Sales Plan. • Managing organizational sales by developingabusiness plan that covers sales • Support the discipline and development of subordinates in Sales Team • Collaboration with marketing team to take the lead in customer care services through negotiation and fast, complete and accurate service systems • Making sales analysis on market situation • Review and change the sales strategy, promotion plan and as need as • Setting individual sales targets with the sales team • Tracking sales goals and reporting results as necessary • Overseeing the activities and performance of the sales team • Coordinating with marketing on lead generation • The ongoing training of the salespeople • Developing the sales team through motivation, counselling and product knowledge education • Promoting the organization and products • Understand our ideal customers and how they relate to our products • Supervise and manage other duties assigned by the superior according to the business requirements inatimely manner. GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Referigerator & Freezer Sales & Service Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Manager – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / တောင်ဒဂုံမြို့နယ်
၁) Sales Manager – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။ • Bachelor Degree Holder and prefer MBA . • Having Product Strategy and road map . • Minimum3years of working experience asaSales Manager level in FMCG . • Strong Leadership skills and Communication skills . • Good communication skills and English4Skills . • Able to operate Microsoft word , excel and power point . • Using Internet & E-mail . • Able to work under pressure and willing to travel . • Uniform provide . • Office Hours ( 9:00 AM to 5:00 PM ). • Sunday & Public Holidays Off . GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော FMCG Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_6048" align="alignnone" width="936"] Two colleagues discussing about the project in the office.[/caption]
Sales Manager (For Cosmetic) – Male/Female (5) Posts - လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း)
Salary Rang : 600000-700000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Cosmetic Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Manager(For Cosmetic) – Male/Female (5) Posts - လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၃၀ - ၄၅)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	အလှကုန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Modern Retail, Whole Sales , Regional Sales ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံ လက်တွေ့ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်တိုင်ဈေးကွက်ရှာဖွေ၍ Sales Team တစ်ခုလုံးအားစီမံ အုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	Sales & Marketing Plan , Way Plan များရေးဆွဲ၍ BOD သို့ဈေးကွက် Report တင်နိုင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	English စကားအသင့်အတင့်ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် (9:00 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Manager – Male/Female (5) Posts - လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Cosmetic Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Manager – Male/Female (5) Posts - လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၃၀ - ၄၅)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	အလှကုန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Modern Retail, Whole Sales , Regional Sales ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံ လက်တွေ့ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်တိုင်ဈေးကွက်ရှာဖွေ၍ Sales Team တစ်ခုလုံးအားစီမံ အုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	Sales & Marketing Plan , Way Plan များရေးဆွဲ၍ BOD သို့ဈေးကွက် Report တင်နိုင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	English စကားအသင့်အတင့်ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် (9:00 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Manager – Male/Female (5) Posts - လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Cosmetic Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Manager – Male/Female (5) Posts - လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၃၀ - ၄၅)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	Cosmetic Whole Sales ပိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	Good Leader Ship Skills ဖြင့် Sales Team တစ်ခုလုံးအားစီမံ အုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	English စကားအသင့်အတင့်ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် (9:00 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223785 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Manager – Male - (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Stationary Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁ ) Sales Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဒဂုံမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - Sales & Marketing Manager ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃) နှစ်ရှိရမည်။ - Computer Word,Excel,Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ - ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ဗလာစာအုပ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသည့် ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Manager – Male (5) Posts / လစာ - ( ညှိနှိုင်း ) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Manager – Male (5) Posts / လစာ - ၅၀၀၀၀၀( အထက် ) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ •	Sales or Marketing degree qualification with MBA more preferred and must have5years sales experience with heavy machine (or) Automobile Industry. •	Must have machinery (or) automobile knowledge / experience. •	Current car driving License. Car travel if work is demanding. •	Must haveagood personality and sales driven. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
၁) Area Manager - Male - (5) Posts/လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Co.Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁) Area Manager - Male - (5) Posts/လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - FMCG ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။ - Target ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပီး Sales Team အားဦးဆောင်နိုင်ရမည်။ - အရောင်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Diploma (or) Certificate ရှိရမည်။ - အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်ဆောင်ရွက်နုိင်သုဖြစ်ရမည်။ - Computer Word,Excel,Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
၁) Sales Manager - Male - (5) Posts/လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Co.Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁) Sales Manager - Male - (5) Posts/လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Sales & Manager ဖြင့်အတွေ့ကြုံ ရှိရမည်။ - Engine Oil အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - Engineer Mechanical ဘွဲ့ရသူဦးစားပေးမည်။ - Computer Word,Excel,Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - English စကားပြောနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Manager – Female - (5) Posts/လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ရန်ကင်းမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Engineering Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Sales Manager – Female - (5) Posts/လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ရန်ကင်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၉ မှ ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် Certificate or Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - အသင်းအဖွဲ့ကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ - Management ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရမည်။ - Sales Target ကိုပြည့်မှီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။သွက်သွက်လက်လက်ရှိရမည်။ - တရုတ်ဘာသာစကားပြောနိုင်ရင်ဦးစားပေးမည်။ - လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရရုံးတွင်း၊ရုံးပြင်၊နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမည်။ - English စာရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုဝါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )